सलोनको लागि सारा र प्रियंकाको भिडन्त, “सुश्री सम्पत्ति” को निर्माण घोषणा | Screennepal
सलोनको लागि सारा र प्रियंकाको भिडन्त, “सुश्री सम्पत्ति” को निर्माण घोषणा
अहिले एक पछि अर्को नेपाली चलचित्रको निर्माण घोषणा भईरहेको छ । फरक फरक शैली र कथामा थुप्रै व्यक्तिहरुले चलचित्र निर्माण गर्ने दौड यति बेला चलिरहेको छ । यसै बीच चलचित्र “सुश्री सम्पत्ति” को पनि निर्माण घोषणा गरिएको छ । फाल्गुन १५ गते देखि छायांकनमा जाने भनिएको यस चलचित्रको पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक रुपमा निर्माण घोषणा गरिएको हो । चलचित्रलाई सुब्रत आचार्यले निर्देशन गर्दैछन् । यस्तै चलचित्रको कथा पनि उनि आफैले लेखेको जानकारी दिइएको छ ।
चलचित्रमा युवा पुस्ताको बेजोड उपस्थिति रहेको छ । हो दर्शकबिन चलचित्रमा नायक सलोन बस्नेत र नायिका सारा शिर्पालीको जोडी जम्दैछ । यसरी एक साथ पर्दामा यी २ पहिलोपटक देखिन लागेका हुन् । तर चलचित्रमा अथितिको रोलमा नायिका प्रियंका कार्कीको पनि अभिनय रहने निर्माण पक्षले बताएको छ । यस्तै चलचित्रमा विनोद न्यौपाने, प्रमोद अग्रहरी, राजाराम पौडेल, विशारद बस्नेत, सुनिता श्रेष्ठ ठकुरी लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहने छ । सुरेश अधिकारीको सोलो शब्द र संगीत रहने चलचित्रमा कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, भरत रेग्मीको सम्पादन र अर्जुन तिवारीको छायांकन रहने छ ।
रमेश त्वायना प्रस्तुतकर्ता रहेको यस चलचित्रको निर्मातामा विज्ञान राई, नुनम सुब्बा र रमन सिलाकार रहेका छन् । चलचित्रको अधिकांश छायांकन पोखरामा हुने कुरा पनि निर्माण पक्षले बताएको छ । सुख सयलमा हुर्किएकी एक युवतिको कथा बोल्ने यो चलचित्र २०७५ को तिजको ताका प्रदर्शन आउने कुरा निर्देशक आचार्यले बताए ।
Previous Postकिन अनमोलले गरे यस्तो ? हुटिङको लागि पैसा दिएर दर्शक ल्याएको आरोप Next Postसतीसले जति माया दिए पनि सुरभीलाई नपुग्ने ?!
संगीतकार दिपविनको निधन
इटहरीमा ‘बहुभाषिक संगीत महोत्सव’ हुने
रुसको मस्कोमा अप्रिल २२ देखि २९ गतेसम्म हुने डिटेक्टीभफेस्ट इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिबलमा नेपाली लघु चलचित्र...
screennepal२०७६, ९ बैशाख सोमबार
मौसमको यसरी बन्यो ‘घरजम’
screennepal२०७६, ७ बैशाख शनिबार
यस्ता छन् ‘मिस नेशनल आइकन–२०१९’का १३ प्रतियोगी (फोटोफिचर)